30ème Anniversaire Groupe ACEEM – ACEEM
30ème Anniversaire Groupe ACEEM
Ity hetsika androany faha 07 martsa 2019 ity dia famaranana ara-pomba ofisialy ny fankalazàna ny faha-telopola taona ny niorenan’ny VONDROM-PANABEHAZANA ACEEM.Nandritra izany koa no nanolorana mari-boninahitra sy médaly ho an’ireo mpiasa miisa 24 ka anisan’izany ny Filoha Mpanorina sady Tale Jeneraly ny mari-boninahitra fara-tampony dia ny « Grand Croix du 2ème Classe ».
Fankalazana ny nahatraran’ny vondrom-panabeazana ACEEM ny tsinferin-taona mihantoana niorenany no anto’nizao lanonana izao.mihantoana hoy izy satria feno 32 taona tamin’ny 25 febroary 2019 teo ny nijoroan’ny ACEEM na ny ASSOCIATION CULTURELLE DES ENSEIGNANTS ET ELEVES DE MADAGASCAR ary niova ho Action pour la culture, l’enseignement et l’education à Madagascar tamin’ny 25 Mars 1995. Fivondronan’ny mpampianatra matianina sy tsara ofana ny ACEEM.
Fanolorana fanampim-pampianarana omban-pitaizana ho an’ireo mpianatra sy mpiasa nanomana fanadinam-panjakana no endri-panabeazana nosahaniny. Nitatra tamin’ny toerana sy tanana maro manerana ny nosy ny COURS ACEEM.
Manaraka ny toetr’andro ny Aceem ka efa misokatra ihany koa izao ny site web ny aceem
Ny VONDROM-PANABEHAZANA ACEEM araka izany anarany izany dia misy sampan maro .
Ny “Cours ACEEM” izay misandrahaka amin’ny toerana maro ankehitriny.
Ireo sekoly na Institut izay misahana ny fampianarana ambaratonga Faharoa sy arak’asa
Ny Lycée privé ACEEM etsy Ankadivato
Ny Oniversite ACEEM etsy Manakambahiny
Fa manana station radio koa izy izay efa tsy zovina amin’ny mpihaino maro dia ny ACEEM Radio
Ary mampy an’izay rehetra izay ny toeran fialahamboly eny Anjeva.